Mivelatra metaly vy ny aluminium
Aluminum Expanded Metal Mesh dia vita amin'ny lovia aluminium izay voatsindrona / voatsindrona ary ahinjitra, mamolavola endrika fananganana diamondra / rhombic (standard). Miitatra, ny plate aluminium dia ho endriny mandritra ny fotoana mahazatra. Ny firafitra sy ny trusses vita amin'ny diamondra dia mampatanjaka sy mafy orina ity karazana bolongam-bolo ity. Ireo takelaka aluminiana mitatra dia azo atao anaty modely fanokafana isan-karazany (toy ny mahazatra, mavesatra ary matevina). Karazam-pandrefesana isan-karazany, famoahana habe, akora ary habe haingo no vokarina. Aza misalasala mifandray aminay raha mahaliana anao izany.
Ny vy matevina miforitra haingana rohy
Ny rohy vita amin'ny vy tsy mihetsika be dia be dia boribory misy vy amina fisokafana amin'ny lafiny iray ary vita amin'ny vy grade 304 na 316.Ny toerana no mampifandray ilay rohy, dia manamboatra ilay fehikibo eo amin'ny toerana misy azy fotsiny ianao. ny zavatra lehibe dia tsy harafesina rehefa mandeha ny fotoana, na amin'ny rivotra mando aza. Na dia matetika ny habe eo amin'ny 3.5mm sy 14mm aza, raha misy habe manokana tadiavinao dia mangataha azafady fa afaka manolotra izany izahay.
Balustrde sy fiarovana fiarovana fanosotra vy vy vy vatan'ny harato
Ny valin-dresaka vy vita amin'ny vy matevina dia mety ho an'ny infilionaly balustrade, toy ny tohatra, tohodrano, balustrade ary balconade. Sehatra bebe kokoa, fiantraikany bebe kokoa, fiarovana tsara kokoa ， vy matevina vy ho an'ny fanamboarana ny tohatra ho an'ny trano fonenana izay miaro ary koa ny maha-singa famolavolana. Ny lozibes vy vita amin'ny vy matevina vita amin'ny vy matevina dia manana fanavaozana mora vidy, tsy azo ihodivirana, tsy mahatohitra ary mahatohitra hery mahery vaika, izay manohitra ny orana, ny ranomandry sy ny rivo-mahery.
Voromahery vorona volontany tsy vatan-kazo Knotted Mesh, vatan-doko stainless vita amin'ny vatan-doko, dia karazana lamba manenona tsotra vita amin'ny tanana, ny tady tariby samy hafa dia miampita etsy ambony sy ambanin'ny tady tariby samy hafa. Ny tady tariby sy tariby amin'ny ankapobeny dia mitovy ny halavam-bolany.
Singa fefy lion
Lavona fanodinana liona amin'ny ankapobeny dia vita avy amin'ny vy tsy mety vy ferrule mesh na kofehy vita amin'ny tadin-drindrona, lozin-tariby vy vita amin'ny vy tsy mihetsika, liona sy lambam-baravarankely amam-bavony, mety ho ara-toekarena sy tontolo iainana, miaraka amin'ny fanokafana fanamiana sy fantsom-bidy tsara, ny fika vita amin'ny mahazaka tady dia afaka manome kalitao tsara indrindra. toe-javatra fifandraisana ho an'ny mpitsidika. Tsy mpanamboatra vy vita amin'ny vy izahay eto Chine, mamolavola sy mamorona endrika haben'ny liona famonoana araka izany.
Ny tariby miady amin'ny tariby anti-mitete, nidina ny harato fiarovana fiarovana, dia natao hisorohana ny loza ateraky ny Drops Object ary tsy azo antoka ny tontolo iainana. Ny lozam-pifamoivoizana na fianjera dia mitranga rehefa mianjera amin'ny avo iray ny zavatra iray ary manimba ny fitaovana, ny ratra na ny fahafatesana.Tsy hanohintohina ny fiarovana ny mpiasa fotsiny izany fa ny fitaovam-pitsikerana amin'ny faritra mety hisy fiantraikany.